I-Duet: Sebenzisa i-iPad yakho njenge-Monitor Eyengeziwe | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 17, 2019 NgoMsombuluko, Juni 17, 2019 Douglas Karr
Njalo ngezikhathi ezithile, uthola uhlelo lokusebenza olumangazayo ozibuza ukuthi wake wenza kanjani ngaphandle. Kade ngisebenza kusayithi ithani namakhasimende nasezikhungweni engisebenza nazo ezweni lonke, kepha ngikuthole kunzima ukukhiqiza ngesikrini esisodwa nje. Ngonakaliswe ngokuba nezikrini eziningi ehhovisi lami, futhi ngangifuna okuthile komgwaqo.
Ucwaningo lwase-Utah luthole ukuthi abasebenzi bakhombise ukukhushulwa okungu-44% lokukhiqiza yemisebenzi yombhalo kanye nokwenyuka okungama-29% kwemisebenzi yespredishithi lapho usuka kokukodwa isikrini kuya ku okubili-Ukuqapha ukusetha.
Ngithole uhlelo lokusebenza lwe-iPad, Duet, eyakhiwe futhi yakhiwa abanye Abanjiniyela be-Apple, futhi kube kuhle kakhulu. I-latency iyamangalisa, ngisengasebenzisa isikrini sokuthinta, futhi ngikwazi ukunika amandla amandla we-touch bar esikrinini se-iPad.
Nasi isibhamu sedeski lami elikude kwelinye lamakhasimende ami. Ngixhunywe kufayela le- I-DisplayLink plugable okokuqapha kwedeski nenethiwekhi, bese i-iPad Pro yami ixhunywe nge-USB kwi-DisplayLink. I-DisplayLink akuyona into edingekayo yehadiwe… yilokho abanakho kuleli klayenti elithile.
Ngikwazi ukuvumelanisa izibonisi ngisebenzisa izilungiselelo zokubonisa ze-OSX futhi ngingahudula bese ngiphonsa kunoma yisiphi isikrini.
Lapho ngihamba, ngimane ngilethe i-laptop ne-iPad yami noma yikuphi bese ngifaka i-plugin noma ngabe ngikuphi. Uhlelo lokusebenza lweDuet ludinga ukusebenza kuwo womabili amadivayisi, kepha ukusetha bekuwumoya futhi lapho nje ngixhuma nge-USB umqaphi ubusaphila. Ngikwazi nokusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ze-iPad uma ngingathanda.
UDuet wenze isoftware yakhe yatholakalela i-PC futhi!
Tags: isibonisi se-duetIsibonisi se-iPadukuqapha kwesibiliukuqapha kwesithathu